အဖွဲ့ဝင်များ၏ မအားလပ်သည့် ကြားမှ တစ်အုပ်ထက် တစ်အုပ် ဒီဇိုင်း၊ စာအုပ် အရည်အသွေးနှင့် စာများပါ အကောင်းဆုံး မဟုတ်သည့်တိုင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ကြိုးစားထားမှုကို ဤစာစောင်တွင် တွေ့မြင် နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယခုထက် ပိုမို ကောင်းမွန်လာအောင်လည်း ကြိုးစားကြဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရသ မျိုးစုံအောင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန်လည်း ကြိုးစားနေပါသည်။ […]
Online ပေါ်တွင် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု့နိုင်ရန် PDF file Link ကို အောက်ဖက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မိမိ Connection Speed ပေါ် မူတည်၍ အချိန် အနည်းငယ် […]
This is justadraft. I will wrap it up tomorrow.
Direct link http://unobusa.org/wp-content/uploads/2011/07/UNOB_newsletter_2print.pdf
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၀ခု၊ သြဂုတ်လ (၂၄)ရက်
“ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသတင်းစာစောင် ” ကို ယခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်၍ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)အဖြစ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမည့် ” မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ သတင်းစာစောင် ” အတွက် အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း “စာမူ”များဆက်သွယ်ပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
UNOB အဖွဲ့ဝင်သော်၎င်း၊ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူသော်၎င်း မည်သူမဆိုပါဝင်ရေးသားနိုင်ကြပါသည်။ စာစောင်သည် Comm unity အကျိုးအတွက်သာလျှင်ဖြစ်၍ စာမူခငွေကြေးချီးမြင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အောက်ပါခေါင်းစဉ်အရ၎င်း၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ၎င်း ပေးပို့နိုင်ကြပါသည်။ […]
Admin on Zawgyi Font inaMAC OS(Apple) VideoPlease read first paragraph in this post, how to r…
Saw Saw on Zawgyi Font inaMAC OS(Apple) VideoOpen System Preferences > Keyboard > Input S…
Admin on Zawgyi Font inaMAC OS(Apple) Videoအထက်က post ထဲကအတိုင်း လိုက်လုပ်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ C…